Da'da baraf ee ugu dambeysay iyo sida uu bini aadamku ku yimid America | Saadaasha Shabakadda
Waxaan u isticmaalnay, nasiib daro, inaan aragno cawaaqibka isbedelka cimilada. Adduun kulul oo sii kordheysa iyo cawaaqib xumada tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u socota. Waxyaabo badan oo aan sidoo kale aragnay inay maanta dhacayaan, horay uma aysan ahayn sidaas. Gurigeenna, meeraha Dunida, waxaa soo maray wareegtooyin waqtiyada kulul iyo kuwa baraf leh. Taariikhda Aadanaha ayaa inagu filan in aan la kulanno xilligii barafka ee ugu dambeeyay. Kaas oo waliba door muhiim ah ka ciyaaray taariikhdeena xagga ballaadhinta tirakoobka dadka ee adduunka. Mid ka mid ah dhacdooyinkaas waa shaki la’aan imaatinka aadanaha ee qaaradda Mareykanka.
Waa sidaas Waxaa jira aragtiyo dhowr ah oo ku saabsan sida aadanaha u yimid Ameerika. Dhammaantood, mid ka mid ah kuwa ugu macquulsan uguna macquulsan ayaa ah inay lug ku mareen “Beringia Bridge”. Sidoo kale loo yaqaan kaliya Beringia. Wareegga cas oo dhan ee sawirka wuxuu muujinayaa buundada makro ee bilaabatay 40.000 sano ka hor. Waxaa loo xisaabiyaa taas bini'aadamku wuu ka gudbi karaa 20.000 sano ka hor isagoo socda, halka heerka badda uu hoos u dhacay 120 mitir.
1 Dhulkeenu muxuu ahaa markaa?
2 Dhamaadka da'da barafka
3 Paleoclimatology. Farsamooyinka barafka iyo siraha
3.3 Isotopes xasilloon
Dhulkeenu muxuu ahaa markaa?
Sawir laga soo qaaday Khariidadaha Google ee Bering Sea halkaasoo ku yaalay Buundada Beringia
Barafku wuxuu daboolay dhul ballaaran. Qiyaastii saddex jeer ka badan celceliska hadda jira. Celceliska heerkulka dhulkeennu wuxuu ka hooseeyay 10 lowerC celceliska hadda ee 15ºC. Buundada Beringia, oo ah qaybta lagu calaamadeeyay wareegga cas, waxay sameysay qaab looga gudbo labada qaaradood. Xilliyada da'da barafka, heerka badda ayaa hoos u dhaca. Dhanka kale, aagagga dareeraha ahi way sii adkeeyaan. Sida aan ka faallaynay, barafku aad ayuu uga ballaadhnaa. Xadaarad reer miyi ahna waxay u ahayd irrid laga galo adduunka cusub.
Waxay sii mareen Woqooyi-bari Aasiya, Ruushka maanta la joogo, iyagoo sii maraya Buundada Beringia, oo hadda ah Bering Sea, waxay gaareen Waqooyiga-Galbeed ee Mareykanka, ee maanta loo yaqaan Alaska. Maacuun ka timid awoowayaasheen ayaa la helay, oo u eg dhaqanka ay lahaayeen. Isla maacuunta, isla utility-ka, waa loo jarjarey isla markaana loo sameeyey si isku mid ah.
Dhamaadka da'da barafka
5.000 sano kadib, qiyaastii 15.000 oo sano ka hor, xilligii barafku wuu dhammaaday. Si kadis ah, heer kulka ayaa u kacay 1 ilaa 3 sano ee soo socota. Sida laga soo xigtay diiwaanka khubarada cilmiga cirib-tirka, oo baran kara isbeddelada cimilada ee 125.000 sano ee ugu dambeysay baraf si hufan oo wax ku ool ah leh. Sidoo kale dariiq ay ugu wacan tahay xoreynta CO2 ee lagu keydiyey Antarctica, sida daraasadihii ugu dambeeyay iyo cilmi baaristu muujinayaan. Machadka Barcelona ee Sayniska Deegaanka iyo Teknolojiyada ayaa kaqeyb qaatay kan dambe.
Meerahu wuxuu bilaabay inuu dib isu dhiso. Reer guuraheennii aan cabsanayn ee raadinta noolaanshaha, waxay sii wateen socodkooda min Waqooyiga ilaa Koonfurta Ameerika oo dhan. Barafleyda waxay bilaabeen inay dib udhacaan, heerka badda mar kale ayuu sare usii kacayay, waxaana la socday marinka labada qaaradba la xiray ilaa waqtigaas. Kaliya illaa wax yar oo ka badan 500 sano ka hor, iyo si rasmi ah, labada ilbaxnimoba waxay dib u kulmi doonaan mar kale, iyagoo ku horumaray siyaabo kala duwan.
Paleoclimatology. Farsamooyinka barafka iyo siraha
Seynisyahanno Falanqeynaya Barafka
Dhakhaatiirta Paleoclimatologists ayaa isticmaala farsamooyin kala duwan si looga soo jaro cirifka cimilada. Tusaale ahaan, waxa ku jira sedimentary, meesha laga bilaabo kiimikada dhagxaanta ama dhalada lafa-guray si looga sooro fauna, flora, plankton, manka ... Farsamo kale ayaa noqon doonta dendroclimatology, halkaasoo macluumaadka laga soo saaro siddooyinkooda geedaha batroolka lagu shubo. Dhuxulada si loo arko Tº ee heerka dusha sare ee badda ku jiray. Wejiga fadhi ee halkaasoo heerka badda lagu arki karo, oo muujinaya isbeddello waaweyn oo ciribtiran. Xaaladda barafka, inta badan la isticmaalo badanaa waa kuwa soo socda:
Inta udhaxeysa go'yaal baraf ah oo la sameeyay oo la isku duubay sanadba sanadka ka dambeeya, waxaan ka heli karnaa paleopolen. Tani waxay ogolaaneysaa in la qiyaaso wixii doogga ahaa ee jiray sannadahaasXitaa dhexdeeda waxaa ku jira dambas ka soo baxa xoogagga fulkaanaha.
Hawada ku xayiran qaabka microbubbles waa isha laga helo macluumaadka ay ugu wacan tahay halabuurkiisa kaas oo gacan ka geysanaya go'aaminta nooca jawiga ee xilligaas jiray.
Uumiga biyaha, iyo farqiga yar ee isotopes deggan kuwaas oo ku kaydsan baraf culeys ka yar hydrogen iyo oksijiin, isku xirnaansho ayaa laga helay muddooyin kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Xilligii barafka ee ugu dambeeyay iyo sida aadamuhu ku yimid Ameerika
Antarctica waxaa looga tagi karaa la'aan 25% baraf ka yar dhamaadka qarniga